Sakarya စက်ဘီးစခန်းတွေတိုးလာနံပါတ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 SakaryaSakarya အတွက်စက်ဘီးစီးဘူတာ၏တိုးမြှင့်အရေအတွက်
31 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
စက်ဘီးဘူတာအရေအတွက် sakaryada တိုးပွားလာနေသည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကမြို့သူမြို့သားတစ်လျှောက်လုံးတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရပ်နားသငျ့သစ်ကိုစက်ဘီးပေါ်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကမြို့သူမြို့သားတစ်လျှောက်လုံး Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရပ်နားသငျ့သစ်ကိုစက်ဘီးပေါ်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စီးတီးအရေအတွက်ကို 100 စက်ဘီးယေဘုယျအားဖြင့်စက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖြန့်ဝေဘို့ဖျော်ဖြေအလုပ်ရပ်တန့်ထင်ရှား။ ,
သမ္မတ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမှကြေညာချက်မှာတော့ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့အလွန်စက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ကဒီဘာသာရပ်အပေါ်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့သစ်ကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းအောင်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကို၏သူ့ရဲ့ network တိုးချဲ့နေသည်, ကSAKBİSရသောစနစ်နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အားကစားမှ Sakarya ၌အကြှနျုပျတို့၏နိုင်ငံသားများ၏စမတ်ဆိုင်ကယ်ထောင်ပေါင်းများစွာအောင်၏အခွင့်ထူးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုလတံ့သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းန်ကြီးဌာနရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများသင့်လျော်သောစက်ဘီးလမ်းကြောင်းစေသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့မြို့တော်ကိုရပ်တန့်ပရိသတ်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများမှာသူတို့ရဲ့စက်ဘီးနားလည်သဘောပေါက်။ မှတ်တိုင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစုပေါင်းအရေအတွက်က 100 ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Sakarya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စက်ဘီးစီး၏ဖြန့်ဝေဘို့ငါတို့အလုပ်အသုံးအနှုန်းတွေအသုံးပြုခဲ့ကြသည် "တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်။
Sakarya ရိုးရာအတိုင်းစက်ဘီးစီးခရီးစဉ်မှနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ 01 / 05 / 2019 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ယာဉ်အသွားအလာအပတ်7အားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ တနင်္ဂနွေဆောင်ပုဒ်ရိုးရာအတိုင်းစက်ဘီးစီးခရီးစဉ် 'အသက်တာ၏ဦးစားပေးလမ်းသွားလမ်းလာဦးစားပေး' 'မေလ511.00 နာရီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရင်ပြင်၌ကျင်းပရာလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် 54 စက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးအိတ် Raffles မှဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ပြည်နယ်နှင့် Sakarya စက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာအပတ်7'' နှင့် ပူးပေါင်း. ဖွဲ့စည်းအဆောက်အဦးအပြင်အားကစားအသင်း။ ရိုးရာအတိုင်းစက်ဘီးစီးခရီးစဉ် 'တနင်္ဂနွေ, မေလ5အပေါ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ '' ဘဝရဲ့ဦးစားပေးဦးစားပေးထုတ်လွှတ်မှုရဲ့စက်ဘီးခရီးစဉ်ကြွေးကြော်သံအောက်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်, ဒီမိုကရေစီ Sakarya ရင်ပြင်ပန်းခြံအတွင်းစတင်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်အပျက်သင်တန်းသားများကိုထီတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီပါလိမ့်မည်သူတို့ရဲ့စက်ဘီးနှင့်လက်ဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်။ 54 စက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးစီးခြင်း ...
Kocaeli အတွက်ခေတ်သစ်ရပ်တန့်တွေတိုးလာအရေအတွက် 13 / 12 / 2018 အကြီးအကျယ်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လန်းဆန်းများတွင်အသုံးပြုနေ့စဉ်ဘဝဖြင့်ခေတ္တတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်း။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်အဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးခေတ်သစ်နိုင်ငံသားများ၏နယ်ပယ်အတွင်းလုပ်နေပါသည်စေနိုင်ရန်အတွက်သေဒဏ်စီရင်န်ဆောင်မှု pauses ။ ဤသည်နေ့ရက်မှ 250 တထောင်နိုင်ငံသားများခေတ်သစ်မှတ်တိုင်များကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ် 1250 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရပ်ရန်, ယေဘုယျအတွက်နိုင်ငံသားများမှမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရေးကြီးသောန်ဆောင်မှုများအခက်အခဲအကောင်အထည်ဖော်ရှိခြင်းနေကြသည်။ Interchange, မြေပေါ်, ထိုကဲ့သို့သောမြို့တော်, ဒီအမှတ်ခေတ်သစ်မှတ်တိုင်၏ဆောက်လုပ်ရေးလစျြလြူရှုမထားဘူးသစ်ကိုလမ်းများအဖြစ်မြို့ကြီးများမှအများအပြားန်ဆောင်မှုများချွေတာ။ Kocaeli ဖြတ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ 2018 ကိုယ်ခန္ဓာ၏အဖြစ် ...
Kocaeli အတွက်ခေတ်သစ်မိုးလုံလေလုံစခန်းများ၏တိုးမြှင့်အရေအတွက် 01 / 02 / 2019 အကြီးအကျယ်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လန်းဆန်းများတွင်အသုံးပြုနေ့စဉ်ဘဝဖြင့်ခေတ္တတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်း။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်အဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးခေတ်သစ်နိုင်ငံသားများ၏နယ်ပယ်အတွင်းလုပ်နေပါသည်စေနိုင်ရန်အတွက်သေဒဏ်စီရင်န်ဆောင်မှု pauses ။ ဤသည်နေ့ရက်မှ 250 တထောင်နိုင်ငံသားများခေတ်သစ်မှတ်တိုင်များကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်လည်းဒေသများတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ၏သားကောင်များများအတွက်ယာယီပုံမှန်အစည်းအဝေးရပ်နား၏ installation ဆောင်းတွင်းလအတွင်းလိုအပ်သောယူဆစေသည်။ ယာယီခေတ္တ, ထို့နောက်ခေတ်မီရပ်တန့်နဲ့အစားထိုး။ ခေတ်သစ် 1250 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရပ်ရန်, ယေဘုယျအတွက်နိုင်ငံသားများမှမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရေးကြီးသောန်ဆောင်မှုများအခက်အခဲအကောင်အထည်ဖော်ရှိခြင်းနေကြသည်။ Interchange ထိပ်တန်း ...
စက်ဘီးနည်းလမ်းများ Sunflower ချိုင့်စက်ဘီးအတွက် Sapanca ရေကန်ထိ 15 / 11 / 2018 ဥက္ကဋ္ဌ Zeki Toçoğlu, စက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြှင့်တင်ရန်သစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုပိုမိုသူတို့က Sunflower ချိုင့်စက်ဘီး Sapanca ရေကန် 21 အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက် kilometers'll ရောက်ရှိဖို့ရန် "အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြကြေညာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၏ 10 ကီလိုမီတာပထမအဆင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့ကြာသပတေးနေ့ဒီဇင်ဘာ 13 အပေါ်တင်ဒါမှထွက်သွားလိမ့်မည်။ ပိုကောင်းရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အခြားအရေးကြီးသောခြေလှမ်းကြာပါသည်။ Sapanca ရေကန်ကနေနေကြာဆိုင်ကယ်ချိုင့်သူတို့ 18 ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုနှင့်အတူကွန်ယက်ကို 39 ကီလိုမီတာမှလာကြလိမ့်မည်ကီလိုမီတာပေးသောနူးညံ့သော, စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုမှထွက်သွားလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာပထမအဆင့်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Zeki Toçoğluများအတွက်စီမံကိန်းအဆင်သင့်ကြောင်းသစ်ကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ...
အနိုင်ရသူ 300 စက်ဘီးဆိုင်ကယ်ကျွန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကြေညာခဲ့သည်ကိုရှာရန် 18 / 12 / 2018 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စက်ဘီး Sunflower ချိုင့်အားဖြင့်လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဌာနနှင့်ကျွန်း၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 300 အပိုင်းပိုင်းဆိုင်ကယ်ဆွဲယူကျင်းပခဲ့သည်ခါနီး။ Raffles ဆုရရှိသူလိပ်စာအတွက်အမည်များကို www.sakarya.bel.t ။ ဒီဇင်ဘာလ 19-22 Sunflower ချိုင့်၌ဆုရရှိသူနှင့်ကျွန်းဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်သူတို့စက်ဘီးယူနိုင်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 300 အပိုင်းပိုင်းမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်Toçoğluဖွငျ့သတငျးကောငျးပေးထား Sunflower ချိုင့်နှင့်ဆိုင်ကယ်ကျွန်းအားဖြင့် Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစက်ဘီးထားပါတယ်။ 300 ဆိုင်ကယ် Raffles ၏ပိုင်ရှင်များထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဆုရရှိသူ Thread နှင့်အတူထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro လိုင်းညအလုပ်လုပ်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်!
အဆိုပါ Hejaz မီးရထား၏စက်တင်ဘာလ 1 2008 100 တည်ထောင်ခြင်း: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
နေကြာချိုင့်စက်ဘီး Sakarya ဒါဟာYakışခဲ့သည်
စားသုံးခြင်းအတွက် Sakarya စမတ်စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့် 15 အမျိုးမျိုးပွိုင့်
စက်ဘီး Sakarya အားကစားနေရပ်လိပ်စာမူမည်
Sakarya စက်ဘီး Friendly စီးတီးတည်နေကြလိမ့်မည်